HIM | Health in Myanmar » 2011 » June
Abortion (2) မလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ဝန် (၂)
ကိုယ်ဝန် ရှိနိုင်၊ ရနိုင်တဲ့ ရက်တွေမှာ အတူနေမိပြီးရင် ဘယ်နှစ်ရက်လောက် အကြာမှာ ကိုယ်ဝန် ရှိ-မရှိ သိနိုင်ပါမလဲ။ ပုံမှန် ရာသီ မလာမှပဲ ဆီးစစ်မှ သိနိုင်စေတဲ့နည်းပဲ ရှိတာလား။ တခြားနည်းနဲ့ အဲဒီရက် မတိုင်ခင် စောပြီး သိနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများ ရှိပါသလား။
အချစ်နှင့် အိမ်ထောင်ရေး သာယာမှု ပြည့်ဝစေရေး ကဏ္ဍအပိုင်း (၁)
တချို့ က အိမ်ထောင် ရေးသာယာမှုမှာ Sex ၌ အ ပြည့်အဝ မှီနေကြောင်း၊ အချစ် ထက်ပင် Sex က ပို၍ အရေး ကြီးကြောင်း အမျိုးသမီး များစွာက ရင်ဖွင့်ခဲ့ ပေသည်။ ၎င်းတို့ ရင် ဖွင့်ချက်များအရ အိမ်ထောင်ရှင် ယောကျာ်း များ၏ အားနည်းမှု၊ Libido (ကာမစွမ်းအား) ကျ ဆင်းမှု၊ မိမိဇနီး အလို အင်ဆန္ဒ အားနားမလည်မှု၊ မဖြည့်စွမ်းနိုင် မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။ ဖြစ် ရပ်များမှာ Case By Case တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး မတူညီကြပေ။ ဤကဏ္ဍ အားအခန်း ဆက် ရှည်အဖြစ် ဆက်လက်ဖော်ပြ သွားပါမည်။
နှစ်ပေါင်း (၃၀) အကြာမှာ အေ့စ် ရောဂါ ကာကွယ်နိုင်ပြီ
စတင် ဖြစ်ပွားချိန် ကာလကနေ ယနေ့ (၂၀၁၁) ကာလ အထိ နှစ်ပေါင်း(၃၀)တိတိ ဆေး ပညာရှင် များက နေ့ည မလပ် စမ်းသပ် ဖော်ထုတ်မှုများ အရအေ့စ်ရောဂါ ဆိုးကို ကာကွယ် နိုင် ခဲ့ပါပြီ လို့ နယူးအင်္ဂလန် ဆေးပညာစာစောင်က သတင်းကောင်း ပါးလာပါ တယ်။
သောက်ရေအိုး၊ ခွက်၊ ပန်းကန် စသည်တို့ကို အတူတူသုံးခြင်းဖြင့် ရောဂါ မကူးနိုင်ကြောင်း ပြောပြီး ရေကို ခပ်သောက်ခဲ့သည်။ ကူးစက်နိုင်သည့်နည်းလမ်း မကူးစက်နိုင်သည့်နည်းလမ်း များကို ပြောပြခဲ့သည်။ မိမိကျန်မာရေးကိုသာ ဂရုစိုက်ရန် ပြောခဲ့သည်။
Al Jazeera on drug use and HIV in Kachin
Here you can watchashort and not very analytical Al Jazeera video on injecting drug use in Myitkyina.
ဓာတ်ခွဲခန်း အဖြေ အမျိုးမျိုး
လူနာအချို့က ဓာတ်ခွဲခန်းအဖြေ မှားယွင်းထွက်ရှိလာတာမျိုးကို ကြုံဖူး ကြပါတယ်။ ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုစီက ကွဲ ပြားတဲ့ အဖြေတွေ ထွက်ရှိလာတတ် တာကိုလည်း တွေ့ရှိနေကြရ တဲ့အတွက် ဘယ်ဓာတ်ခွဲခန်းက စိတ်အချရဆုံးလဲ လို့ မေးလာသူတွေရှိတတ်ပါ သေး တယ်။ ဓာတ်ခွဲခန်းအဖြေတွေ အမျိုးမျိုး ထွက်ရှိနေရတာဟာ
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသော ကချင်ပြည်နယ်တွင် အစိုးရစစ်တပ်က အမျိုးသမီးများကို မတရားပြုကျင့်နေကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်းတခုက အင်္ဂါနေ့တွင် စွပ်စွဲလိုက်
Is superinfection rare?
One of the reasons that couples in which both members are HIV positive are told by counsellors to use condoms is that superinfection may occur with more than one kind of HIV. This appears to be rare in this population where sexual transmission is the most common means of transmission.
Agree with much of what Elisabeth Pisani says
Here is an interview with Elisabeth Pisani. The [him] moderator agrees with much she says. It is important to point out that it appears to be only in parts of southern Africa that women have several concurrent partners. … In the final paragraph one reason there may be less distortion is that she is no longer with WHO or UNAIDS to distort it.
အဓမ္မကိုယ်ဝန်ဆောင် ကလေးမွေးခိုင်းသည့် အိမ်
အသက် ၁၅ နှစ်နှင့် ၁၇ နှစ်ကြားရှိ မိန်းကလေးများသည် သူတို့၏လုပ်ငန်းရှင်အတွက် ကလေးများမွေးပေးရန် စေခိုင်းခံနေရကြောင်း သတင်းများရရှိ ခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံအရှေ့တောင်ဘက်၊ အဘာပြည်နယ်ရှိ နေအိမ်ခြံဝင်းကို ရဲများက စီးနင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြင်းဆေး၊ နွားဆေး (ခေါ်) လိင်စိတ်ကြွဆေးသုံးစွဲသူ များလာ
တရုတ်နယ်စပ်ဘက်က အများ​ဆုံး​ဝင်တဲ့​ လိင်စိတ်ကြွ​ဆေး​တွေကို ​မြေလတ်နယ်ဘက်​တွေမှာ သုံး​တဲ့​သူ​တွေ များ​လာတယ်လို့​ သိရပါတယ်။